I-Pink-Collar Ghetto yabaseTyhini
Igama elithi "i-pink-collar ghetto" lithetha ukuba abafazi abaninzi banamathela kwimisebenzi ethile, ngokuqhelekileyo imisebenzi ehlawula phantsi, kwaye ngokuqhelekileyo ngenxa yesini sabo. "I-Ghetto" isetyenziswe ngokufuziselayo ukukhupha indawo apho abantu bahlaselwa khona, rhoqo ngezizathu zezoqoqosho nezentlalo. "I-collar-collar" ichaza imisebenzi eyayibanjwe ngabasetyhini kuphela (intombi, unobhala, umninimzi, njl)
I-Movement's Liberation Movement yazisa iinguqu ezininzi zokuwamkelwa kwabasetyhini kwindawo yokusebenzela kuyo yonke i-1970.
Nangona kunjalo, izazi-ntsapho zijonge abasebenzi be-pink-collar, kwaye abafazi abazange bafumane imali eninzi kubantu. Ixesha eli-pink-collar ghetto lisibonise ukungafani kwaye lityhila enye yezindlela ezibalulekileyo abafazi ababengenako kuluntu.
I-Pink-Collar kunye neMisebenzi yeBlue-Collar
Iingcali zezilwanyana kunye neengcali ze-feminist ezibhale nge-pink collar workforce zibonise ukuba imisebenzi ye-pink-collar yayisoloko ifuna imfundo encinane kwaye ihlawulwe ngaphantsi kwemisebenzi yamasebe emhlophe, kodwa ihlawule ngaphantsi kwemisebenzi ye-blue collar egcinwe ngabantu. Imisebenzi yamacollar-collar (ukwakhiwa, ukumbiwa kwezimayini, ukukhiqiza, njl.) Yayifuna imfundo engaphantsi kwezemfundo kuneemisebenzi yamhlophe, kodwa amadoda aphethe imisebenzi ye-collar-collar ayedla ngokubambisana kwaye athambekele ukufumana intlawulo engcono kunokuba abafazi babambelele kwi-pinki -collar ghetto.
Ibinzana lisetyenziswe ngomsebenzi we-1983 nguKarin Stallard, uBarbara Ehrenreich kunye noHolly Sklar obizwa ngokuba yiNtlupheko kwi-American Dream: Abafazi kunye nabantwana bokuQala .
Ababhali bahlalutya "ubufazi bentlupheko" kunye nokuba inani elinyukayo labasetyhini ekusebenzeni lalisetyenziswa kakhulu kwimisebenzi efanayo njengoko beyenayo ukususela kwinkulungwane edlulileyo.
Iifrikhi zeeholide ngabaculi besifazane
Imbali yeMbali yabasetyhini
Isikhokelo sokugqoka i-Gear Right to Restrains Races and Muds Runs
Imfazwe Yehlabathi II: USS Langley (CVL-27)
Ukufumana iiNcwadi zoNcomelo ze-MBA